Ahoana ny fomba hanaovana Reel amin'ny Instagram | Famoronana an-tserasera
Encarni Arcoya | 18/10/2021 20:00 | Nohavaozina amin'ny 18/10/2021 20:10 | Tambajotra sosialy
Elaela ny Instagram amin'ny endrika fanontana vaovao, izany hoe ny Reels. Tany am-piandohana dia fitsapana izy ireo saingy noraisina tsara, hany ka voatazona izany rehefa mandeha ny fotoana. Na izany aza, betsaka ny mbola tsy mahalala ny fomba fanaovana Reel amin'ny Instagram.
Raha izany no anao, na ataonao izany fa tsy azonao ny valiny tokony hataonao, ireto ny lakileny hahafantaranao, tsy ny fomba fanaovana azy ihany, fa ny fomba fanaovana azy amin'ny fomba matihanina hahombiazana kokoa. Ataovy?
1 Inona no atao hoe Reel Instagram
2 Izay tokony ho ao an-tsainao alohan'ny hanaovana Reel
3 Aiza no misy ireo kodiarana?
4 Ahoana ny fomba hanaovana Reel amin'ny Instagram tsikelikely
5 Azo zaraina ve izy ireo?
Inona no atao hoe Reel Instagram
Voalohany indrindra, mila fantatrao tsara izay lazaintsika momba ny Reel. Ireo dia horonan-tsary izay zara raha misy 15-30 segondra. Ireo horonan-tsary ireo dia azo avoaka amboarina, izany hoe, mamela anao hampiakatra na hampihena ny hafainganana ny Instagram, manampy lahatsoratra, mozika, sivana, feo na vokany.
Arakaraka ny andanianao ny fotoana dia tsara kokoa.
Fitaovana ity eo amin'ny faran'ny fakantsary Instagram ary mamela anao hiditra amin'ny bokotra fanovana isan-karazany izy io mba hamoronana Reel kalitao manokana sy ambonin'izany rehetra izany. Anisan'ireo bokotra ireo ianao manana ny feo, hikarohana mozika; Vokatry ny AR, fitifirana amin'ny famoronana sasany; timer sy countdown; fampifanarahana; sy ny hafainganana.
Ho fanampin'izay, ny horonantsary dia tsy mila horaketina anaty clip iray, afaka ampiarahana daholo izy ireo ary avy eo amboarina.
Izay tokony ho ao an-tsainao alohan'ny hanaovana Reel
Alao an-tsaina hoe hamorona horonan-tsary ianao alohan'ny hanaovanao azy mivantana amin'ny Instagram. Fahita izany, indrindra any amin'ny fivarotana na orinasa mitady zavatra matihanina kokoa. Eny, tokony ho fantatrao fa ny vahaolana farany natoro anao dia 1080 × 1920 teboka. Ary ny tahan'ny lafiny dia tsara kokoa noho ny 9:16.
Ho fanampin'izay, tsy maintsy dinihinao ireto manaraka ireto:
Tsy afaka manampy sary ianao. Raha te-hametraka sary ianao dia ho posta mahazatra izany. Reels dia natao ho an'ny horonan-tsary ihany.
Ho an'ny tenifototra, 30 fotsiny no azonao ampiana. Mitandrema, satria raha mametraka bebe kokoa ianao, ny zavatra tokana azonao dia ny fiheverana azy io ho SPAM ary mety hanimba ny kaontinao manokana izany.
El lahatsoratra miaraka amin'ny Reel dia tsy tokony hihoatra ny 2200 litera. Tokony ho 350-400 eo ho eo ireo teny ireo.
Manoro hevitra anao ihany koa izahay ny handaminanao mialoha. Amin'ity fomba ity dia ho lasa tsara kokoa. Misy mihevitra fa tsara kokoa ny voajanahary, ary marina izany. Fa amin'ny tranga inona. Raha ho an'ny orinasa na fivarotana matihanina ny kaonty, indraindray ny fanomezana izany fahatsapana filaminana sy drafitra izany dia manampy ny mpanjifa hatoky anao amin'ny fividianany. Fa raha mahita korontana amin'ny tambajotra sosialy izy ireo dia mety hampiahiahy. Ankoatr'izay dia tsy ho tsara tarehy ho "fampisehoana" ho an'ny mpanaraka vaovao hafa.
Aiza no misy ireo kodiarana?
Ho fanampin'ny fanaovana sy famoahana azy ireo dia fantaro fa afaka mahita ny Instagram Reels, na ny anao na ny an'ny namanao.
Mba hanaovana izany dia mila manao fotsiny ianao mankanesa ao amin'ny fizarana Fikarohana ary ao no hahitanao ireo horonantsary namboarina manokana. Hivoaka amin'ny endrika sary foana izy ireo ary azonao atao ny mizara, na mizara izany aza.
Raha tsara vintana ianao fa miseho amin'ny 'Asongadiny' tsara kokoa io, satria hahazo fahitana bebe kokoa ianao. Saingy, mba hahatratrarana izany dia ilaina ny manisa ireo dingana rehetra tsy maintsy raisina mba hanaovana Reel ao amin'ny Instagram
Ahoana ny fomba hanaovana Reel amin'ny Instagram tsikelikely
Ankehitriny, andao jerena ny fomba fanaovana Reel amin'ny Instagram amin'ny rangotra. Ho an'ity, ny dingana tokony hataonao Ireto manaraka ireto:
Sokafy ny fampiharana Instagram. Raha mijery azy ianao dia misy fakan-tsary mivoaka eo ambony eo akaikin'ny anarana Instagram. Tsindrio eo.
Ankehitriny, tsy maintsy misafidy eto ambany ny zavatra tianao hatao ianao, raha fampisehoana mivantana, tantara iray na, izay zava-dehibe amintsika ankehitriny, Reel.
Alohan'ny hanombohanao manoratra dia azonao atao ny manampy audio, izany hoe, hira azo lalaovina mandritra ny fandraisam-peo ataonao. Manana motera fikarohana ianao hitadiavana ilay tadiavinao. Mazava ho azy, tadidinao ve fa 15-30 segondra fotsiny ny fikoranana? Eny, tsy maintsy manapaka ampahany amin'ity hira ity ianao.
Ny bokotra manaraka dia ny bokotra hafainganam-pandehan-tsary, raha tianao ho voarakitra amin'ny hafainganam-pandeha mahazatra na haingana kokoa.
Ireto ny vokany. Amin'ity tranga ity, ny Instagram dia manome anao fahafahana hametraka effets na sivana, arakaraka izay tianao. Azonao atao ny mijery azy ireo alohan'ny handraisana azy ireo hahafantaranao ny mety ho endrik'ilay zavatra tianao raketina.
Farany, tsy maintsy apetrakao ny faharetan'ny horonantsary. Ity bokotra ity koa dia manampy amin'ny fametahana famantaranandro, izany hoe, hahalala hoe rahoviana izy no hanomboka handrakitra ary rahoviana no hifarana.
Ny famantarana voalohany dia ny halavan'ny horonantsary. Ary avy eo ny bokotra dia hamela anao hametraka ny timer.
Izao dia mila manomboka firaketana fotsiny ianao ary, rehefa vita dia azonao zaraina amin'ny rindrinao sy / na Hizaha, safidin'ireo lahatsoratra Instagram (hanomezana mpihaino bebe kokoa ianao raha mivoaka).
Azo zaraina ve izy ireo?
Izao dia efa vitanao ny Reel, ary namoaka azy koa ianao, fa ahoana raha te hizara izany amin'ny kaonty Instagram hafa ianao? Sa efa nozarain'ny namanao izany? Io dia mety ho?
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao dia ny fomba fizaranao (satria azonao atao) dia miankina betsaka amin'ny sehatry ny fiainana manokana anananao, izany hoe miankina amin'ny daholobe na tsy miankina ny kaontinao.
Raha ampahibemaso, Ao amin'ny Explora dia manana habaka ahafahanao mahita ny Reels an'ny mpampiasa Instagram ianao ary azonao zaraina amin'ny mpanaraka anao navoaka indray mandeha tamin'ny fahana. Raha tsy miankina ny kaontinao dia azonao zaraina amin'ny feed izany, saingy tsy ho zarain'ny mpampiasa amin'ny mpanaraka azy hafa izany satria satria atiny "manokana" dia tsy maintsy mpanaraka anao izy ireo mba hahita azy io aloha.
Ary ahoana no anaovana azy? Homena anao io saika amin'ny faran'ny famoronana Reel anao. Ao amin'ny efijery fizarana, tsy maintsy mamonjy ilay volavolan-dalàna ianao ary manoro hevitra anao izahay mba hanova ny sarony fonony ho iray izay mety amin'ny horonan-tsarinao. Omeo lohanteny sy tenifototra izy. Farany, asio marika ireo olona tadiavinao.
Tsy mila manasongadina fotsiny ianao fa mizara izany amin'ny Browse ary koa amin'ny Feed mba hahafahan'ireo mpanaraka mizara azy.
Efa lasa mazava aminao ve ny fomba hanaovana Reel amin'ny Instagram? Raha manana fanontaniana ianao dia ampahafantaro anay dia hiezaka hanampy anao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Tambajotra sosialy » Ahoana ny fomba hanaovana Reel amin'ny Instagram